Ahoana no hanamarinana ny fahamendrehan'ny manam-pahaizana SEO momba ny varotra ecommerce?
Ny sehatry ny varotra dizitaly dia tena takiana amin'izao fotoana izao. Izany no mahatonga ireo masoivoho SEO sy ireo mpanolo-tsaina mahaleo tena miseho amin'ny fanomezana ny tompon'ilay tranonkala miaraka amin'ny tolotr'izy ireo. Sarotra ny mahita manam-pahaizana manokana momba ny e-commerce sy za-draharaha manam-pahaizana momba ny varotra SEO izay hahatonga ny orinasanao an-tsokosoko hiroborobo noho ny vidiny mety. Amin'ny ankapobeny dia misy safidy misy eo amin'ny kalitao sy ny tolotra mora azo. Indrisy anefa, ny soso-kevitry ny fikarohana dia tsy servisy vokatry ny ahafahanao mahazo fotoana fohy. Izany no mahatonga anao manimba ny volanao raha toa ka toa tsy misy ilana azy na tsy misy kalitao ny asa fanatontosana - retention factor insurance. Mba hanampiana anao, dia mametraka lisitry ny TOP-10 fanontaniana izay ilainao ny manontany ny manam-pahaizana momba ny varotra e-varotra e-commerce alohan'ny hanaovana ny karamany.
Fanontaniana ho an'ny manam-pahaizana momba ny varotra SEO
Inona no azonao lazaina ahy momba ny tranokalako?
Alohan'ny fananana mpikaroka momba ny e-varotra B2B e-varotra, tokony hahita ny fomba fiheviny. Tokony ho takatrao fa ny fizotran'ny SEO anao dia ny handinihanao raha mifanaraka amin'ny fahatakaranao ny tokony hatao amin'ny tranokalanao mandritra ny fandefasana fikasana. Ankoatr'izay, mila azonao atao ny manombantombana ny traikefa sy ny fahaiza-manaon'ny mpikambana SEO ao aminao. Indrisy anefa fa eo amin'ny sehatra voalohany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa SEO ianao dia tsy afaka mifandray afa-tsy amin'ireo manampahefan'ny varotra. Mety hampidi-doza ho an'ny mpanjifa sy ny manam-pahaizana izany satria tsy mifandray mivantana. Na dia izany aza, dia tena famantarana ratsy raha olona iray resahinao amin'ny Skype, finday na finday mivantana dia tsy afaka manadihady marina ny tranokalanao amin'izao fotoana izao na manome anao sosokevitra tena tsara hanatsarana ny tranokalanao SEO.
Inona ny rafitra fitantanana votoaty miaraka aminao?
Mila mahafantatra tsara ny manam-pahaizana momba ny e-varotra SEO manana traikefa amin'ny rafitra fitantanana ny tranokala misy anao.Misy fahasamihafana goavana eo amin'ny Shopify CMS sy WordPress, indrindra amin'ny singa ara-teknika manintona. Izany no antony, alohan'ny hanamboarana manam-pahaizana SEO iray dia mila miomana amin'ny CMS ianao. Ataovy azo antoka fa ny manam-pahaizana manam-pahaizana momba ny fikarohana karama azonao dia afaka manova sy mikaroka amin'ny sehatra ara-teknika samihafa fitantanana ny votoatiny.
Hanao fiovana eo amin'ny tranokalako ve ianao sa ny ekipan'ny fivoaran'ny tranonkala dia hamaly izany?
Ny tolotra fampandrosoana ho an'ny tranonkala dia ampahany manan-danja amin'ny e-varotra fanentanana e-varotra. Ny tranonkalan'ny tranonkala e-commerce lehibe indrindra dia tsy tena vonona ny hanolotra ny fanalahidin'ny orinasa an-tserasera. Na izany aza, tsy afaka manome tsiny azy ireo ianao. Izany no antony tokony hijeranao fa ny ekipa manam-pahaizana momba ny e-varotra SEO dia afaka manome anao tranokala fampandrosoana alohan'ny fampidirana azy ireo. Ankoatr'izay, mila manontany momba ny vidiny ianao satria maro ireo sampan-draharaham-pampandrosoana marobe mitaky fanampiana fanampiny ho an'ny tolotra fampandrosoana web. Ny zavatra farany tadiavinao dia ny volana iray amin'ny tetikasa SEO hahafantarana fa ny orinasa iray izay nokarinao vao haingana dia manome ny tolotra toro-hevitra. Amin'ity tranga ity dia mila mividy votoaty fampiroboroboana amin'ny Internet ianao ary hiafara amin'ny famatsiana vola.